192.168.8.1 - Hubi Awooda Calaamadaha WiFi
Hubi WiFi Signal Xoog - Haddii shabakadaadu u muuqato mid gaabis ah ama bogagga shabakadda aysan soo dejin doonin, dhibaatadu waxay noqon kartaa xiriirkaaga Wi-Fi. Waxaa laga yaabaa inaad aad uga fogtahay aaladda, ama qolal cufan ayaa carqaladeeya calaamadaha. Kaliya iska hubi xooggaaga saxda ah ee Wi-Fi.
Waa maxay sababta Xoogga Calaamadaha WiFi ay isbeddel u sameeyaan
Calaamadda adag ee Wi-Fi waxay muujineysaa isku xirnaan badan oo lagu kalsoonaan karo. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad qaadato faa iidada buuxda ee xawaaraha internetka ee aad heli karto. Awoodda calaamadaha Wi-Fi waxay kuxirantahay arrimo badan, tusaale ahaan sida aad uga fogtahay routerka, ha ahaado isku xirnaanta 5ghz ama 2.4, iyo nooca darbiyada kuu dhow. Markaad ugu dhowdahay router, ayaa amaan ah. Maaddaama isku xirnaanta 2.4ghz ay sii baahinayaan, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dhibaatooyin faragelin ah. Darbiyada qaro weyn ee laga sameeyay maaddooyinka cufan (sida shubka) ayaa ka hortagi doona calaamadda Wi-Fi. Calaamadda daciifka ah, taa beddelkeeda, waxay u horseeddaa xawaare gaabis ah, ka tagid, iyo xaalado yar oo 'joogsi buuxa ah.
Dhibaato xiriir kasta ma aha natiijada ka soo baxda xoogga tabarta ee daciifka ah. Haddii shabaqa taleefankaaga ama kaniinigaagu gaabis yahay, ku bilow inaad dib u bilowdo router-ka haddii aad marin u leedahay. Haddii arrintu sii socoto, tallaabada xigta waa in la hubiyo haddii Wi-Fi yahay arrinta. Isku day isticmaalka internetka adoo adeegsanaya qalab ku xiran Ethernet. Weli Haddii aad dhibaatooyin leedahay, shabakaddu waa dhibaatada. Haddii xiriiriyaha Ethernet uu fiicanyahay & dib u habeynta router aysan waxtar lahayn, markaa waa waqtigii la hubin lahaa awoodda calaamadaha.
Adeegso Nidaamka Howlgalka ee lagu Dhisay
Microsoft Windows iyo nidaamyada kale ee ka hawlgala waxay ka kooban yihiin koronto dhisme ah oo lagula soconayo isku xidhka shabakadaha wireless. Tani waa habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu cabiro awoodda Wi-Fi.
Noocyada cusub ee Windows, dooro astaanta shabakadda ee barta shaqada si aad u aragto shabakadda bilaa-waayirka ah ee aad ku xidhan tahay. Waxaa jira shan baarar oo tilmaamaya xoogga astaamaha isku xirka, halkaasoo mid uu yahay midka ugu saboolsan iyo shanta ugu fiican.
Isticmaalka Taleefoonka casriga ah
Qaar ka mid ah qalabka moobiilka oo awood u leh internetka ayaa leh halbeeg dejimaha oo soo bandhigaya shabakadaha Wi-Fi xooggooda. Tusaale ahaan, iPhone-ka, tag barnaamijka Settings, hadda booqo Wi-Fi si aad u aragto awoodda shabakadda Wi-Fi ee aad ku jirto & xoogga ishaarooyinka ee shabakadda ku jirta.
Tag Barnaamijka Waxtarka ee Adapters-ka adapters-ka ah
In yar oo soo saare ka ah qalabka shabakada bilaa siligga ah ama kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ayaa soo bandhiga barnaamijyo softiweer ah oo hubiya awoodda calaamadaha wireless. Barnaamijyada noocan oo kale ah waxay ku wargeliyaan xoogga iyo tayada calaamadaha ku saleysan saamiga 0 ilaa 100 boqolkiiba & faahfaahin dheeri ah oo si gaar ah loogu talagalay qalabka.
Nidaamka Helitaanka Wi-Fi Waa ikhtiyaar Hal dheeri ah
Nidaamka helitaanka Wi-Fi wuxuu hubiyaa mawjadaha raadiyaha ee aagga deriska la ah wuxuuna helaa xoogga calaamadda ee u dhow meelaha laga soo galo wireless-ka. Qalabka galmada ee loo yaqaan 'Wi-Fi detector sexist' oo ah qaab qalab yar oo qalab ah oo ku habboon silsilad muhiim ah.
Inta badan nidaamka helitaanka Wi-Fi wuxuu adeegsadaa tiro udhaxeysa 4 ilaa 6 Laydh si uu uusoo jeediyo xoogga calaamadaha qaybaha baararka sida utility-ka Windows. Maaha sida hababka kor ku xusan, laakiin aaladaha nidaamka helitaanka Wi-Fi ma cabiraan xoogga isku xirnaanta laakiin meeshiisa, kaliya saadaal awoodda xiriirka.
Categories Qaamuuska Internetka Post navigation